The Ab Presents Nepal » बिहीबार भगवान विष्णुको पूजा, व्रत बस्दा के फल प्राप्ति हुन्छ ? (पूजा विधिसहित)
कसरी पूजा गर्ने ? पूजा विधि – बिहान स्नानपछि पहेलो वस्त्र धारण गर्ने । त्यसपछि पहेलो फूल र चन्दनलाई एक साथ मिलाएर प्रसाद बनाउने । यस प्रसादलाई भगवानलाई अर्पण गरेर पूजा गरौँ । यसबाट भगवान विष्णु प्रसन्न भएर उहाँको आर्शिवाद तपाईंको घरमा सधैँ भइरहने छ ।